တံဆိပ်များနှင့် ကြယ်သီးများ အွန်လိုင်းမှာယူမှု.
ပင်မ > ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် မှင်များ >အပူပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အခဲအငွေ့ပြန်ခြင်း >တံဆိပ်များနှင့် ကြယ်သီးများ
တံဆိပ်များနှင့် ကြယ်သီးများ 51 ရလာဒ်များ
BUK45,100 - 50,111/carton
BUK88,000 - 97,778/carton
BUK174,600 - 194,000/carton
BUK218,400 - 242,667/carton
BUK268,600 - 298,444/carton
BUK306,400 - 340,444/carton
BUK258,960 - 287,733/carton
BUK312,400 - 347,111/carton
BUK226,400 - 251,556/carton
BUK61,820 - 68,689/carton
BUK144,000 - 160,000/carton
BUK262,600 - 291,778/carton
BUK80,520 - 89,467/carton
BUK325,000 - 361,111/carton
BUK168,500 - 187,222/carton
BUK282,400 - 313,778/carton
BUK157,000 - 174,444/carton
BUK284,040 - 315,600/carton
BUK213,440 - 237,156/carton
BUK152,000 - 168,889/carton
เหรียญแม่เหล็กติดตู้เย็น สำหรับเครื่องปั๊มเข็มกลัด,พวงกุญแจ,ที่เปิดขวด และแม่เหล็กติดตู้เย็น ฯลฯ,ขนาด 44ม.ม.,จำนวน 1000 ชิ้น ---1000pcs 44mm Blank Fridge Magnets Supplies for Badge Maker Machine
BUK162,500 - 180,556/carton
ปุ่มพวงกุญแจการ์ตูน หรือเหรียญพวงกุญแจการ์ตูน (ไร้ลวดลาย) พร้อมโซ่กุญแจ,ขนาด 58 ม.ม. จำนวน 800 ชิ้น --- 800pcs 58mm Blank Cartoon Button Button Supplies
BUK294,400 - 327,111/carton
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-CO-25
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-CO-58
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-ZB-100
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-PQ-44
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-BX-75
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-PQ-58M
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-XH-58
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-JZ-75M
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-XJ-75
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-CO-32
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-CO-68F
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-PQ-58P
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-CO-37
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-KT-44
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-JK-44
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-XH-44
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-GZ-44
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-YS-44
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-XH-75
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-GZ-58
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-JZ-58
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-CO-55F
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-BX-44
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-KT-58
တံဆိပ်များနှင့် ကြယ်သီးများ လက္ကားဈေးနှုန်း၌ဈေးချထားပါသည်။ ဈေးပေါပေါဖြင့်ဝယ်ယူလိုက်ပါ တံဆိပ်များနှင့် ကြယ်သီးများ မှ တံဆိပ်များနှင့် ကြယ်သီးများ ဖြန့်ဝေသူ,အကောင်းဆုံး တံဆိပ်များနှင့် ကြယ်သီးများ ရောင်းရန်, ကျွန်ုပ်တို့သည် ---- ဖြစ်သည် တံဆိပ်များနှင့် ကြယ်သီးများ ထုတ်လုပ်သည်,တံဆိပ်များနှင့် ကြယ်သီးများ ဖြန့်ဝေသည်.